Somali - BBC News Somali_hotbuy觀塘
Golaha Musharraxiinta Mucaaradka ayaa sheegay in ay hakiyeen dibadbax ay qorsheynayeen in ay barito ku qabtaan Magaalada Muqdisho kaddib markii ay sheegeen in ciidamo lagu gadaamay halkaas.
Taallada Daljirka Dahsoon waxay astaan u tahay qabuuraha askartii Soomaalida ee u dhintay difaacidda Jamhuuriyadda Soomaaliya, balse aan la aqoonin. Waa calaamad muhiim ah oo caan ka ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerar lagu qaaday Xabsiga Dhexe ee magaalada Boosaaso, iyagoo intaas ku daray in ay halkaas ka sii daayeen 400 oo maxbuus oo ka xirnaa.
Doorashada Soomaaliya: Muxuu u fashilmay shirkii Décalé?
Labada dhinac ayaa midba kan kale ku eedeeyay fashilka kulanka la filayay in heshiis lagu gaaro.
5 Maarso 2021
In kabadan 900 oo milyan oo tan oo cunto ah ayaa la tuuraa sannad kasta
Tan iyo markii ay xayiraadaha la xiriirta Covid-19 bilawdeen, waxaa yaraaday cuntooyinkii qashinka lagu dari jiray.
Qormadan waxaan uga jawaabayaa laba su'aalood: Maxaa sababay in Feberaayo 8, 2021 la soo gaaro doorasho la'aan iyo heshiis-siyaasadeed la'aan? Marba haddii taasi dhacday, maxaa xal ah?
Ciidamada Eritrea ayaa lagu eedeeyay inay laayeen dad rayid ah oo ay ku jiraan carruur.
"Aad ayaan ugu faraxsannahay in iskuul loogu magac daray gabadheenna Hodan Naaleeye"
Dad badan oo madow ah oo ay Soomaalida ka mid yihiin daganna xaafadda uu iskuulkay ayaa waayadan u ololeenayay in iskuulka lagu badelo magaca Hodan Naaleeye
4 arrimood oo ku saabsan xasaradaha siyaasadeed ee Soomaaliya
"Duco iyo Alle bari ayaan u kaashanaa la dagaalanka burcadda magaalada"
Listen Next, Xiga Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 6 Maarso 2021, Muddada 29,00
Dhageyso, Dunida Iyo Maanta, 16:59, 5 Maarso 2021, Muddada 1,00,00
Dhageyso, Idaacadda Duhurnimo, 13:59, 5 Maarso 2021, Muddada 30,30
Dhageyso, Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 5 Maarso 2021, Muddada 29,00